रिता साहले किन माग्नुभयो माफी ? (उहाँकै शब्दमा) | सहारा टाइम्स
Home » madhesh » रिता साहले किन माग्नुभयो माफी ? (उहाँकै शब्दमा)
रिता साहले किन माग्नुभयो माफी ? (उहाँकै शब्दमा)
जब म दश कक्षा पास गरेर नर्सिङ पढ्न घरबाट टाढा बस्न थाले, त्यति वेला मेरा अधिकांश साथीहरु पहाडी समुदायका थिए । उँहाहरुले भन्नुहुन्थ्यो कि मधेश र मधेशीहरुको विकास नहुनु र विभेद हुनुमा मधेशीहरु आफँै दोषी छन् ।
नेपाली भाषा नजानेर र पहिरनको कारणले विभेद हुने तर्क दिने गर्नुहुन्थ्यो ।मधेशीहरु आफ्नै कारणले पछाडि परेका छन् । म पनि वर्षौसम्म यही नै सत्य हो भन्ने ठान्थे । तर जब काठमाण्डौँ आएँ, मैले दिन दिनै विभेदको अनुभुति गरे ।
जबकि म कुनै पनि पहाडी समुदायको युवतीभन्दा केही कुरामा पनि कम थिइन । म प्रष्ट नेपाली बोल्थे र आधुनिक पहिरन पनि लगाउँथे । त्यसपछि यसको कारण खोतल्न मधेशसम्बन्धि पुस्तकहरु पढ्न थाले र अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाले । विस्तारै मैले यिनै विषयलाई आफनो लेखन, अनुुसन्धान र अभियानको मार्फत उठाउन थाले ।
विगत पाँच वर्षदेखि मधेशी, महिला, दलित, जनजाति लगायतका सिमान्तकृत समुदायको लागि लेख्ने र बोल्ने गरेकी छु । चाहे त्यो मधेशी दलित होस् वा पहाडी,म सकेसम्म विभेदको विरुद्ध आवाज उठाउन प्रयत्नरत रहन्छु र आजीवन रहने वाचा गर्दछु । यदि जानेर वा नजानेर मबाट वा मेरो परिवारबाट कसैमाथि जात, घर्म आदि कारणले विभेद भएको छ भने म माफी माग्दछु ।